Waxyaabaha Google ka heli karin | Laga soo bilaabo Linux
Waxyaabaha Google aysan heli karin
Courage | | Kuwa kale
Kani waa sawir kaftan ah oo sawirro ah oo aan ku arkay baloog yar oo aan aqriyay ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Kuwa kale » Waxyaabaha Google aysan heli karin
Waxaan helay wally.
Kuligood way shaqeeyaan. Aad ayaan uga walaacsanahay tan:
Waxaan u maleynayay raadinta derbiga-e inay kan tahay:
Halkaa ayaan sawirka uga tagayaa golaha si ay u raadiyaan, waayo xitaa google ma heli karo.
Ku jawaab lucasmatias
Aad u fiican! xD
WAA MAXAY NOOCYADU AY KU SAMEEYAAN EOS EZ?
Anigu waxba ma ihi, gebi ahaanba, maadaama aanan aqoon midkoodna, ma sheegi karo inay yihiin dameer iyo in kale. Wixii aan ka akhriyey, haa, laakiin si fiican, anigu sidoo kale ma xaqiijin.
Waxa aan haysto waa wax ka dhan ah Hoygans haha ​​waxay iga xanaajineysaa in dhammaan magacyadaas ay sidaas wax u qoraan.
"Ke ezKriban Azi", oo raba inay wax yeelaan, oo timaha u shanleeya sida dadka isku jinsiga ah ee soo jiita oo sawir xun siiya aadanaha, laakiin waxa la samayn karo, waa sida adduunku u socdo
Jawaab Guillermo Abrego
Haa, taasi waa la dhahay laakiin ma garanayo cid aan ogaanayo oo la hubo
Sonora, Mexico oo ah halka aan ka imid, waxaan ugu yeernaa moxxos, ma ahan hoygans hahahaha laakiin haa, aad ayey u nuugaysaa inay sidaa wax u qoraan, sidoo kale aniga aad bey ii dhibtaa inay iga qortaan si ka dhakhso badan 🙁
Hadaadan helin ...
Tani waa kaftan la sameeyay, run ma ahan, maxaa yeelay digaag kasta oo aad geliso Google, natiijooyin ayaa ka soo bixi doona.
Midka aan dhigay ma bixinayo natiijooyin (illaa aad ka saarto xigashooyinka mooyee).
Iyo haddaan sifeeyo xitaa taas:
Ha ku sii xusuusin xusuusta Geesinimada, xusuusnow: waddo adag oo cilladaysan ... xD
€ 50 kan ugu raqiisan ee aan arko ... Haddii aan mid kayar heli lahaa, waan xiranayaa.
@Courage, isticmaal ul USB ah intaad keydinayso 😛.
Ma lihi midkood, midka kaliya ee aan haysto, waxaan ugu baahanahay si buuxda fasalka dukumiintiyada caafimaadka
Hahahaha aad u wanaagsan Geesinimada
Gabar saaxiib ah KZKG ^ Gaara, hahahaha. 😀
Miskiinka ha niyad jabiyo xD
Aad u wanaagsan ... kan emos iyo ku-xigeennadu waa runta aan beddelmi karin ee fiisigiska.
Hahaha candela waxa ay ka raadiyeen google, laakiin maxaa diidaya inay raadsadaan wax ka fudud oo lagu helo sida "Ubuntu ayaa ka wanaagsan Debian"
Ku jawaab CubaRed
Ninna majiro, markaa ubunto si dhuumaaleysi ah ayuu igu galay waana inaan la joogaa jeedalka xD
isticmaala fbsd dijo
Raadi "Ubuntoso eex la'aan" ama "Ubuntoso dulqaad" oo ii sheeg haddii aad natiijooyin ka hesho.
Ku jawaab fbsduser
Ku jawaab fanaanin
kii ugu dambeeyay ayaa iga sii qosliyay
"Kuxigeenada shaqeeya" ... Argagax.
Waxaan leeyahay qeexitaan kafiican "siyaasad" tan "akadeemiyada dhabta ah".
Siyaasi: adeegaha aaminka ah ee nidaamka maaliyadeed iyo danahiisa shaqsiyadeed.
Inta hartay, bla bla bla ...
Waxay i xasuusisaa waxyaabo badan oo ka mid ah 404 bog qalad ah: haddii aad raadineyso shaqo hufan oo leh mushahar hufan ... Waxaan la bixi jiray badhanka aan nasiib u yeelan doono. Hadda wuxuu sii wadaa inuu kusoo baxo booska koowaad 😛 http://www.noseencuentra.com/trabajo404.htm
Buugga oo dhammaystiran oo ka kooban 404 bog oo dadkan ah: http://www.noseencuentra.com/index.htm
sifiican ayaa loo qabtay oo run ah, hadaad qorto midab gaar ah kuma tusinayso xulashooyin (kuwa muuqda markaad wax qoreyso oo aadan wali riixin "raadinta"), ama ha ku dhaaran ereyada, isticmaalayaasha qaar ayaa abuuray ikhtiyaarka aad rabto inaad raadiso kumanaan jeer laakiin warqad badalkeeda, sidaas darteed qofka raadinaya ee doonaya inuu u gudbo sida awliyo waa la khiyaaneeyey. Tani waxay muujineysaa in Google ay qoorta ugu xiran tahay xarig qolada kuwa kafaala qaaday iyo kuwa dhaliilsan.
Sidoo kale ma awoodin inay cabudhiso ereyada sida: boqoshaada kalitalisnimada boqoshaada iyo kuwa kale ee leh qeexitaan, maxaa yeelay waxay ka hor imaaneysaa caqliga oo dhan iyo xaqqa in loo arko mid tayo leh oo aan aheyn cay.
Sidoo kale waan necbahay inay kuugu soo weeciso nooca aad ku sugan tahay oo uusan kaliya ka raadinaynin .com iyo wax kale. Sikastaba, waa mashiinka raadinta ugufiican xitaa haduusan isticmaalin chrome-keeda, sidoo kale waa wax laga xumaado inaad rabto inaad kubiirto dhamaan xisaabaadkaaga sida YouTube blog iyo kuwa kale hal
Ku jawaab torgek
Hahaha, aad u fiican!
Available Xfce 4.10pre2 + Rakibaadda
KISS, fikradda ugu shakhsiyan aan ogahay